Jilayaashii Kuch Kuch Hota Hai Maanta Xaalkoda Waa Sidee Halkeese Ka Baxeen (+Sawiro) – Filimside.net
Jilayaashii Kuch Kuch Hota Hai Maanta Xaalkoda Waa Sidee Halkeese Ka Baxeen (+Sawiro)
Sidaan wada ognahayba mashruuca weyn ee Kuch Kuch Hota Hai ayaa shalay u dabala dagaayoeye sanad guuradiisa 20-aad maadama 20 sano kasoo wareegtaya xiliga tiyaatarada la saaray oo la daawaday.
Balse halkee ka baxeen xidigii mashruucan jileen maantase halkee ku dambeyaan inkastoo qaar badan akasoo qeyb galeen xafladaan sida Sana saeed, farida Jalal iyo kuwa kale hadana aan isla barano qaar kamid ah xidigaha mashruucan wax ka jileen.
Anupam Kher Iyo Archana Puran: labadan xidig mashruuca macalimad iyo maamule ayee ku jileen kuwaso jaceyl isku qaba Archana hader Tv-yada ayee ka shaqeesa halka Anupam jiliinkisa aflaamta uu sii wato.
Farida Jalal iyo Johnny Lever: labadaan xidig filmka qeybta shactirada door weyn ayee ka qaateen maantana wali waxay bartanka kaga jiraan qaab jiliinkoda ayagoo aflaamta kasoo muuqdaan.
Parzan Dastur: waa wiilka SRK xambaarsanyaahy kaaso mashruucan ku jilay dhagoolnimo ama aamusnan qof aan hadli karin maantana waa nin weyn oo magaalkiisa dhex mushaaxaya.
Waxaa Aqrisay 1,076